ကောင်းမွန်ဝင်း: ယောကိုဟားမားချိုင်းနားတောင်း နဲ. ယောကိုဟားမားဆိပ်ကမ်း
ယောကိုဟားမားချိုင်းနားတောင်း နဲ. ယောကိုဟားမားဆိပ်ကမ်း
သမီတို.လည်း ပိတ်ရက်ရှည်(၅)ရက်ရဲ.နောက်ဆုံးနေ.မှာတော့ ယိုကိုဟားမား ကိုသွားခဲ့ကြပါတယ်။ ယိုကိုဟားမားရဲ. ချိုင်းနားတောင်းနဲ. ယိုကိုဟားမားဆိပ်ကမ်းကို သွားလည်ခဲ့တာပါ။ နှစ်နေရာစလုံးဟာ နေ.ခင်းကော ညခင်းပါ လူစည်ကားပြီး စိတ်ရော၊ ပတ်ဝန်းကျင်လေထုကော အပြောင်းအလည်းကို ရရှိစေမယ်. ပျော်စရာနေရာနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ချိုင်းနားတောင်းကိုသွားရင်ရထားလမ်းမျိုးစုံနဲ.သွားနိုင်ပြီး ယိုကိုဟားမားကနေ တဆင့်ထပ်ပြောင်းစီးရပါတယ်။ ဘေးကပုံကတော့ ရထားစီးဘို.မြေအောက်ကိုဆင်းနေတဲ.ပုံပါ။ သားရဲ.လှည်းနဲ.ဆိုတော့ ဓါတ်လှေခါးမရှိတဲ.နေရာတွေမှာ စက်လှေခါးနဲ. ဆင်းပါတယ်။
ချိုင်းနားတောင်းနဲ. အနီးဆုံးဘူတာလည်း သုံးခုလောက်ရှိပါတယ်။ သမီးတို.ကတော့ အီချိခါ့ဝါ ဆိုတဲ.ဘူတာမှာဆင်းခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီဘူတာရဲ.နံရံမှာလည်း ချိုင်းနားတောင်း နဲ. ပတ်သက်တဲ. အရုပ်တွေလည်းဆေးခြယ်ထားလို. သားငယ်လေးအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုပေါ.။ အီချိခါ့ဝါ ဘူတာကနေ ချိုင်းနားတောင်းကို ၅မိနစ်မရှိတရှိလမ်းလျှောက်ရပါတယ်။
ချိုင်းနားတောင်းရဲ. အ၀င်လမ်းပေါက်တွေမှာ မုခ်ဦးအကြီးကြီးတွေနဲ. ချိုင်းနားတောင်းရောက်ပြီဆိုတဲ. စိတ်အပြောင်းအလဲဖြစ်စရာ မြင်ကွင်းတစ်ခုပါပဲ။
ရောက်သွားတဲ.အချိန်က နေ.လည်စာစားချိန်ဖြစ်လို. ဆိုင်တိုင်းဆိုင်တိုင်းမှာလူတွေကအပြည့်နဲ.တန်းစီ နေတာများပါတယ်။ ဆိုင်တော်တော်များများက အ၀စား၊တစ်ခါပြင်( Lunch Set Menu) တွေနဲ. ကြိုက်ရာမှာစားလို.ရတဲ. မီနူးပုံစံတွေထားထားပါတယ်။ ပီကင်းဘဲကင်နဲ. ငမန်းတောင်ပါတဲ. ဟင်းတွေကိုတော့ ဆိုင်တိုင်းလိုလို တင်ထားကြပါတယ်။ လူတွေကလည်း ချိုင်းနားတောင်းရောက်ပြီဆိုမှတော့ ဘဲကင်နဲ. ငမန်းတောင်ကို စားကြတာကိုး။ နောက်ပြီး ဒီဂျပန်မှာက ငမန်းတောင်ကို စားရင် အသားအရည်လှလို.ဆိုပြီး လူကြိုက်များကြပါတယ်။ ငမန်းတောင်ပါတဲ. ခေါက်ဆွဲပြုတ်။ ငမန်းတောင်ဟင်း၊ ဟင်းချို၊ အခုလည်း ချိုင်းနားတောင်းက စားသောက်ဆိုင်တွေရဲ. ဆိုင်းဘုတ်ကြည့်လိုက်ရင် ငမန်းတောင်ပါကို ပါတယ်။ သမီးတို.လည်း ဒီနေ.တော့ ထမင်းဘူးမယူလားဘူး ၊ ဟုတ်တယ်လေ ချိုင်းနားတောင် လာပါတယ်ဆိုမှ ၀ယ်စားတော့မယ် ဆိုပြီးတော့ပေ့ါ။ နောက်ထပ်ဆိုင်တွေကတော့ ဒမ်ဆမ်နဲ. ခေါကဆွဲပြုတ်ဆိုင်တွေပေါ.။ အ၀စားကို လည်းသိပ်မစားနိုင်တော့ တခါပြင်ပုံစံနဲ. ဆိုင်မှာဝင်စားကြပါတယ်။
ဗိုက်ပြည့်သွားတော့ ဆက်ပြီး ချိုင်းနားတောင်းထဲမှာဆိုင်တွေကြည့်ပြီး လမ်းလျှောက်ကြပါတယ်။ တရုပ်တန်းရဲ.အငွေ.အသက်တွေအကုန်ရပါတယ်။ ခရီးသွားနိုင်ငံခြားသားတွေကော၊ ဂျပန်လူမျိုးတွေကော၊ တရုပ်လူမျိူးတွေကော ပြည့်ကြပ်စည်ကားနေပါတယ်။
သမီးတို.လည်းတရုပ်ကုန်စုံဆိုင်ကြီးတစ်ခုကိုဝင်ပြီးဈေးဝယ်ကြပါတယ်။ တရုပ်ဆိုင်ကုန်စုံဆိုင်ကြီးတွေကနေ သမီးဝယ်လေ့ရှိတာကတော့ ပုဇွန်ခြောက်၊ ငရုပ်သီးဟင်းချက်မှုန်.၊ နဲ. ငရုပ်သီးအတောင့်၊ ပဲငါးပိ၊ ဆေးဘဲဥ၊ ခေါက်ဆွဲခြောက်တို.ပါ။ ဒီနေ.တော့ ပုဇွန်ခြောက်ပဲဝယ်ပါတယ်။ အိမ်နဲ.နီးတဲ. ဆိုင်တွေမှာပဲ အ၀ယ်များပါတယ်။ ဈေးဝယ်ပြီးတော့ ယိုကိုဟားမားဆိပ်ကမ်းဘက်ကို ဆက်လျှောက်ခဲ.ကြပါတယ်။
တရုပ်တန်းကအထွက်မှာ လက္ခဏာဟောတဲ့ဆိုင်တွေ ကို တွေ.ရပါတယ်။
တစ်ချို.လက္ခဏာဟောတဲ့ဆိုင်ရှေ.မှာ စောင့်နေတဲ့လူတော်တော်များပါတယ်။ ပြီးတော့ ချိုင်းနားတောင်းကိုပတ်ကြည့်တဲ. အပျော်စီး သုံးဘီးကားတွေနဲ. လန်ချားတွေကိုလည်းတွေ.ရပါတယ်။ သုံးဘီးကားလေးတွေက တော်တော်လှပါတယ်။ သူ.ကားနံရံမှရေးထားတာက “ဂျပန်နိုင်ငံဧ။်အမြင့်ဆုံး ရှုမျှော်စင်အထပ်”တဲ.။ စာဖတ်ပြီး သုံးဘီးကားကို ထပ်ကြည့်မှ ပိုပြီးရီချင်စရာကောင်းတယ်။
ချိုင်းနားတောင်းကနေ ဆိပ်ကမ်းဘက်ကို လမ်းလျှောက်တဲ. လူတန်းကြီးကလည်း မနည်းမနောပါပဲ။
ဆိပ်ကမ်းဘက်ကိုရောက်တော့ ပြောင်းလည်းသွားတဲ. လေကောင်းလေသန်. ကျယ်ဝန်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ လှပတဲ. ကောင်းကင်နဲ. ပင်လယ်။ ခေတ်မှီတဲ. သင်္ဘောကြီးတွေနဲ. သန်.ရှင်းတဲ. လမ်းပေါ်မှာ ခြေတစ်လှမ်းလှမ်းလိုက်တိုင်း လတ်ဆတ်တဲ. လေရဲ. အထိအတွေ.နဲ. စိတ်ကြည်နူးစရာပါပဲ။
လူတော်တော်များများအုံပြီး ရီသံတွေကြားရတဲ. နေရာကို အနားကပ်ကြည့်လိုက်တော့ ထင်တဲ.အတိုင်းပဲ မျက်လှည့်ပွဲ။ အခုလိုမျက်လှည့်ပွဲတွေကို အပန်းဖြေနေရာတွေ လူသွားလူလာများတဲ. ဘူတာအနီးတွေမှာ မကြာခဏတွေ.ရပါတယ်။ မျက်လှည့်ဆရာတွေဟာ ဂျပန်လူမျိုးတင်မကပါဘူး နိုင်ငံခြားသားတွေလည်းရှိပါတယ်။ အဲဒီနိုင်ငံခြားသားတွေကတော့ ဂျပန်စကားကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပြောတတ်ပြီး ပရိတ်သတ်ကို တသောသောနဲ.ပွဲကျအောင်ကို အာဝဇန်းရွှင်ပါတယ်။ သမီးတို.လည်း ခဏ၀င်ကြည့်လိုက်ကြပါတယ်။
သားလေးက လမ်းလျှောက်ချင်လာတော့ မျက်လှည့်ပွဲကနေ ကမ်းနားတစ်လျှောက်ကို လေညှင်းခံလမ်းလျှောက်ကြပါတယ်။ ပင်လယ်ဘက်က သင်္ဘောကြီးတွေနဲ. ကောင်းကင်က မကြာမကြာဖြတ်သွားတဲ. လေယဉ်ပျံတွေကို ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ.သူတွေကတန်းစီနေပါတယ်။ ကြည့်နေတဲ့လူတိုင်းလိုလိုက ကင်မရာတစ်လုံးနဲ. ကင်မရာမပါတဲ.သူကတော့ လက်ကိုင်ဖုန်းကလေးတွေနဲ. တချပ်ချပ် ခလုတ်နှိပ်ပြီး ရိုက်ကြတယ်၊ ဂျပန်လူမျိုးတွေက သိပ်ဓါတ်ပုံရိုက်ကြတာပဲ။
တဖြည်းဖြည်းနဲ.နေ၀င်သွားတာနဲ.အတူ မီးတွေလည်း တလက်လက် နဲ. စမြင်ရပါတယ်။ ယောကိုဟားမားဆိပ်ကမ်းရဲ. အခုလို လေညှင်းခံတဲ. ဘက်မှာတော့ ကြည့်ရှု လမ်းလျှောက်ဘို. နေရာလေးတွေအများကြီးလုပ်ထားပါတယ်။ ပင်လယ်ထဲကို ထုတ်ထားတဲ. သစ်သားတံတားကြီး၊ စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ ကမ္ဘာပတ်ဇိမ်ခံသင်္ဘောကြီးတွေကို အနီးကပ်ကြည့်လို.တဲ. နေရာတွေနဲ. ကမ်းနားတစ်ခုလုံးကို လှပပြီး၊ခရီးသွားတွေနဲ. အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်ကလာသူတွေကို “ဒါကတော့ ယောကိုဟားမားဆိပ်ကမ်းပဲလို. ပြောစမှတ်ဖြစ်စေမယ့် ပိသုကာပညာတွေနဲ.မွမ်းမံဆောက်လုပ်ထားပါတယ်။
ကြီးမားတဲ. အဆောက်အဦတွေက အစ အလင်းအမှောင်ကို ခွဲပေးထာအဆုံး ရောက်ရှိလာတဲ.သူတွေကို ယောကိုဟားမားဆိပ်ကမ်းရဲ. သင်္ကေတတွေအဖြစ် အမြဲအမှတ်ရစေအောင် ပြင်ဆင်ထားပါတယ်တဲ.၊ ဒီလဟာပြင်လူသွားလမ်းမှာလည်း အခုလို လေးထောင့်အပြားလေးတွေကို တန်းစီပြီးအကန်.လေးတွေလုပ်ပြီး မီးထွန်းထားပါတယ်။ အကန်.လေးတွေဖြစ်နေလို. လေဟာပြင်ထဲမှာ လေတအားတိုက်လိုက်တာကို ခွဲထုပ်ပေးသလိုဖြစ်နေပြီး၊ အလင်းရောင်းကို သိပ်မလင်းလွန်းပဲ လဟာပြင်တစ်ခုကို အခန်းတစ်ခုသဘောမျိုးနဲ. အလင်းရောင်ပေးထားတာကို တွေ.ရပါမယ်။
ညမှောင်တဲ.အထိ ကမ်းနားမှာနေခဲ့ကြပြီး ချိုင်းနားတောင်းကို ပြန်လှည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ညဘက်နည်းနည်းလည်းအေးလာလို ချိုင်းနားတောင်းရောက်တဲ. အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ပူပူနွေးနွေး ၀က်သားပေါက်စီဝယ်စားကြပါတယ်။ ပေါက်စီဆိုင်တွေအများကြီးပါပဲ။ သူနဲ.တွဲရောင်းတာကတော့ သာကူစေ့ကြီးတွေပါတဲ့ အအေးပါ။ လက်ဖက်ရည်အအေး၊ အုန်းနို.အချိုရည်အရသာအမျိုးမျိုးနဲ. သူ.ထဲမှာသာကူစေ့ကြီးတွေထည့်ထားတာပါ။ သာကူစေ့အသေးလည်းရှိပါတယ်။ သမီးတို.လည်း ၀က်သားပေါက်စီဆိုင်တွေထဲက လူတန်းရှည်ဖြစ်နေတဲ.ဆိုင်မှာ ၀င်စီပြီး ပေါက်စီစားသာကူသောက်ကြပါတယ်။ မိုးလည်းတော်တော်ချုပ်လာလို. အိမ်ကို ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ မိုးချုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ အချိန်ကိုပြောတာပါ။ ဂျပန်မှာညဘက်ဆို မီးတွေထွန်းတာများလွန်းလို. ကောင်းကင်ကြီးက အမြဲတမ်းလင်းလင်းကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ မီးရောင်တွေဟပ်ပြီးလင်းနေတဲ. ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပြီး ၊ တစ်ခါတစ်လေ မီးကြိုးလေးတစ်ကြိုးလောက် ယူပြီး ရန်ကုန်ဘက်ကိုသွယ်လိုက်ချင်တယ်လို.တွေးမိပါတယ်။ဘယ်ကိုပဲသွားသွား ဘယ်ကိုပဲရောက်ရောက် မှောင်နေတဲ.ရန်ကုန်ကိုတော့ အမြဲသတိရတယ်။နောက်အပါတ်ဆို ဘာလိုလိုနဲ. ရန်ကုန်မှာလည်း မိုးလကင်းလွတ် သီတင်းကျွတ်တော့မယ်နော်။ ဖယောင်းတိုင်လေးတွေနဲ. လင်းထ်ိန်နေမှာပေါ.နော်။
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Saturday, September 26, 2009